I-K-Tek Precision Machining Inikeza izingxenye zomshini we-CNC Milling ezinokubekezelela okuqinile. Sithuthukise imishini yokugaya i-CNC kusuka ku-3 axis ejwayelekile kuya ku-5 axis. Njenge-ISO9001: 2015 ne-TS 16949: 2009 inkampani yokukhiqiza izingxenye ezibhalisiwe ze-CNC, asigxili ekukhiqizeni kuphela kepha futhi sinikeza izingxenye ezinhle ze-CNC Milling.
Akunandaba ukuthi imikhiqizo iyinkimbinkimbi noma inkulu kangakanani, onjiniyela bethu abanamakhono bayakwazi ukuyikhiqiza ngokunemba nangekhwalithi efanayo. Konke okulindele kumshini wakamuva we-CNC Milling kungenziwa yi-K-Tek Machining Co., Ltd.
Ngokusebenzisa i-CNC Milling Technology yakamuva, ekhiqiza nge-automation kakhulu, ukuhluka kungancipha futhi kulawulwe kude kakhulu.
Kuyini CNC Milling?
CNC Milling ingenye yezindlela ezivame kakhulu machining ukususa impahla. Abasiki bokujikeleza bayadingeka lapho kususwa okubalulekile. Umsiki uyithuluzi lokusika elinamazinyo abukhali ajikeleza ngejubane eliphezulu. Okubalulekile kuzosikwa lapho usuthisa okokusebenza kusika ojikelezayo. Ngezikhathi zokusebenza, isimo osifunayo singenziwa. Ngokuvamile umshini wokugaya unama-eksisi amathathu: X, Y no-Z. Ukukhiqiza izingxenye eziyinkimbinkimbi, i-5-axis, 6-axis izosetshenziswa.
I-K-Tek Precision Machining iyimboni yobuchwepheshe be-CNC Milling. Sinomshini wokugaya osuka ku-3-axis uye ku-5-axis. Unjiniyela wethu osebenzayo angahlala ethola isisombululo sokukhiqiza izingxenye eziyinkimbinkimbi zokugaya ngekhwalithi ephezulu.
• Izimo: Njengoba izidingo zamakhasimende
• Usayizi wengxenye: 0.5-1300mm
Izinto: I-Brass, i-Aluminium, i-Alloy steel, i-Stainless steel njll.
• Ukubekezelelana: +/- 0.005mm
• Kungenziwa egcizelele ngokudweba noma amasampula
• Amaqoqo amavolumu amancane namakhulu
I-K-Tek ingenza ngezifiso ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zezingxenye zemishini ngokunemba ngokwezidingo zamakhasimende, imikhiqizo ehlobene nemishini, i-elekthronikhi, ezishintshayo, ezemoto, ezokwelapha, amandla amasha neminye imikhakha. Sidlulise isitifiketi se-ISO9001: 2015, okwamanje sinabasebenzi abangama-200. Umkhiqizo wethu uthunyelwa eJapan ngama-20%, ama-60% athunyelwe eYurophu naseMelika, singakunikeza ikhwalithi ephezulu nentengo yokuncintisana. Izinto zethu ezijwayelekile ziyinsimbi engagqwali, i-aluminium, ithusi, insimbi ephansi yekhabhoni, amaplastiki wobunjiniyela nezinye izinhlobo zensimbi ye-alloy, singanikeza nokwelashwa kokushisa kanye nokwelashwa okuhlukahlukene kwendawo kumakhasimende: